नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : सन्देश मुलक गीत : खाली हात जाने हो !
सन्देश मुलक गीत : खाली हात जाने हो !
प्रस्तुत यो गीत कोठा भित्र सामान्य फोनको क्यामरा बाट कैद गरिएको हो । मेरा आफ्नै शब्द र स्वर रहेको यो गीतको संगीत सन १९६१ मा शंकर जयकिशनले निर्माण गर्नुभएको थियो । वहाँहरु प्रति उच्च श्रध्दा ब्यक्त गर्दै यो सन्देश मुलक गीत गाएको छु । सदा झैं यहाँहरुको सुझाब र प्रतिकृयाको अपेक्षा गर्दछु । हार्दिक धन्यवाद ।